ekhaya / Church
Kutheni yamaKatolika Church lowo, icawa yokwenyaniso?
Ekuqaleni, oko kuluncedo ukubuza: ntoni amaKristu ukuthini xa athi Nye, icawa yokwenyaniso?
Le Triumph yeCawa ngu Andrea di Bonaiuto da Firenze
ngokubanzi, sithetha abo bakholwayo zintathu Ongcwele–UThixo uYise; uJesu, uNyana kaThixo; noMoya oyiNgcwele–yaye iinkolelo ukuba uYesu wafundisa ebudeni bobulungiseleli bakhe. Kodwa ke kufuneka silumke kuba kukho amaqela abantu abacinga ukuba bangamaKristu, kodwa wongeze ukutolika zabo neengcinga ukuya kude ngaphaya nto uYesu wafundisa.
ke, “i Church” kubandakanya abo balandela iimfundiso bokwenene bakaYesu (nangokwamanqanaba ahlukeneyo), kodwa uYesu wayethetha? Ukuze siphendule lo mbuzo, kuyimfuneko ukuhlola Sciptures.
in YeVangeli kaMateyu (16:18) athi kuPetros uYesu, "Ndiyakuxelela, UnguPetros wena, kwaye phezu kolu lwalwa ndiya kulakhela ibandla lam, kunye namandla elabafileyo akayi kuloyisa. "Kamva xa Matthew 28:20, UYesu uqinisekisa abalandeli bakhe ukuba wayeza kuhlala nabo "njalo, ukuze kube sekuphelisweni kwephakade eli. "Ngokufanayo, kwincwadi yeVangeli kaYohane, UYesu uthembisa ukuba uMoya oyiNgcwele uya kuba ngonaphakade neCawa (14:16).
Kukho iivesi ezininzi zeZibhalo eziquka iNkosi nokusungula "ubukumkani obungayi konakala naphakade." (Umzekelo, ukubona Incwadi kaDaniyeli (2:44), Isaya (9:7) kwaye i YeVangeli kaMateyu (13:24).)
Ngenxa yezo zizathu, sinokuqiniseka ukuba Church uYesu founded-eyona, Church lokwenyanisoUsebenzise zange bawa waza wema gqolo ukususela ngomhla Saint uPetros de namhlanje kwaye ndiya kuhlala khona "kuzo zonke izizukulwana, ngonaphakade ngonaphakade" (njenge St. UPawulos wabhala yakhe Ileta eya Efese 3:21).
Oku kuthetha ukuba iimfundiso iCawa iye yasinda ngenxa yokuba babenikwe kuye nguKristu ngokwakhe wathi, "Izulu nomhlaba aya kudlula, ke wona amazwi am akasayi kudlula " (ukubona Matthew 24:35 kunye nomprofeti Isaya 40:8).
yakhe Ileta yokuqala eya kuTimoti (3:15), Saint Paul ude ukubiza iBandla 'intsika wongqameko inyaniso. "Ngenxa yokuba iBandla laKhe sele abathi imfundiso efanayo phantse 2,000 iminyaka, kukho kwindlela eliqhubekayo nembali edibanisa uluntu lokuqala abafundi bakaYesu ukuba ngokwako owayephila. ke, kufuneka kube lula ukufumana iimfundiso enye imizimba owayephila zamaKristu buyela ixesha ngemihla Apostles.
Kubo bonke uluntu namhlanje ezininzi nezahlukeneyo zamaKristu, kuphela Catholic Church iyakwazi ukuxhasa amabango ayo sobunyani nge Apostolic Succession, okanye umgca engakhange iqhawuke oobhishophu ethe wathwala iimfundiso abapostile 'ngokuthembeka ukususela kwinkulungwane yokuqala de kube namhla. Le nyaniso ixhaswa umzimba imibhalo-izinto zembali yamandulo wobuKristu Iincwadi Abaseki Early Church–apho aqala iincwadi ezaqanjwa ngabantu abafunda Ukholo evela Apostles ngqo. Le mibhalo zifumaneka lula intanethi okanye kulo naliphi na ithala elungileyo okanye ivenkile.
Non-amaKatolika badla ukukhanyela imfuneko yokuba somthombo, Church ukufundisa, kwaye ngokubanzi ukhangela eBhayibhileni njengomthombo yayo yedwa wenyaniso, bakholelwe ukuba iBhayibhile self-etolikayo.
ngalisayo, loo ngcamango ukulahlwa iSibhalo, ngokwayo. bona Saint UPetros Letter Second (1:20-21).
Ngaphezu, kokuba engxakini yokuba kukho inkitha "IBhayibhile-kuphela" amahlelo ukuba ngokwesiseko abavumelani oko kufundiswa yiBhayibhile! Ukuba incazelo zabucala iimfundiso zikaKristu kabani na lemposiso (nokuba ukuconjululwa kwendawo abantu, Ingaba nobunono) ke imibhalo Church zembali zibalulekile ukuze zifumane ulwazi ngendlela kubapostile kunye nabalandeli babo evakalayo iZibhalo Ezingcwele waza waphila Wokholo.
Life of Saint Stephen: Ulungelelwaniso kunye Ukupha amalizo yi fra Angelico encediswa ngu Benozzo Gozzoli
Le mibhalo ezi Abaseki Early Church ziyibonisa ngokuqinileyo ukuqhubeka imfundiso yamaKatolika yeCawa, leyo ethe nakuba imposiso zabantu nesono, intshutshiso, kunye noxinzelelo zenkcubeko eyabangela ukuba iziko eqhelekileyo ukuba alahle imigaqo yayo engundoqo kudala. Zokumakishwa phezu ekuqhubekekeni of the Catholic Church (kwaye ngqo of the Church of Rome) ngenkulungwane yesibini, Saint Irenaeus eLyons wambiza ngokuthi 'iCawa omkhulu yamandulo kubo bonke "ngo Against Heresies 3:3:2.
Qaphela ukuba iintlobo beengcamango ziye elenziwa kwiminyaka kwi abachasi ukuba iCawa ukuzama ukuchaza imvelaphi-okanye uchaze ukuba kude Omunye angase athi. Ithiyori kakhulu oqhelekilyo uthi lobuKatolika owabakho ngenkulungwane yesine, emhlabeni ngexesha uMlawuli uConstantine ngokomthetho ubuKristu Enkulu bonke uBukhosi baseRoma. Le mbono yokuba ekugqibeleni inxalenye enkulu of the Christian Church waba lonakaliswa iimpembelelo zobuhedeni ngenxa ukuba ngama enkulu labaguqukileyo. Kanjalo, xihinga gqithi kule mfundiso ubukho imfundiso yamaKatolika imibhalo nezenkolo ukuba eyawiswa uConstantine, kunye imibhalo ngembali Abaseki Early Church ukubonisa oku ngendlela enamandla.
Life of Saint Stephen: Ukugxothwa kunye ibagibisele ngu fra Angelico encediswa ngu Benozzo Gozzoli
Le Catholicity ezikwekwayo lwababhali ubuKristu yamandulo avezwa.
Cinga, umzekelo, Saint Ignatius of Antiyokwe, abafa emhlabeni nyaka 107. Ignatius waba njengokhozo Abapostile uPetros noYohane wasebenzisa ukufundisa B iCawa sokulwa ngabaqhekeki ezazingakholelwa komzimba.
Uye umahluko yokuba umbhali yokuqala embalini ukusebenzisa igama elithi "yamaKatolika" njengokuba igama elifanelekileyo ukuze Church. "Naphi ubhishophu kubonakala, akabandulula abantu babe khona,"Wabhala; "Kanye njengokuba naphi na uYesu Kristu, kukho Catholic Church. "
Nhlanhla, Antiyokwe, Ignatius 'ibhishopu, kuyenzeka ukuba ibe yindawo apho abalandeli bakaKristu kuqala babebizwa ukuba "ngamaKholwa" (ukubona kwiZenzo zabapostile 11:26).
Lithatha Emnye oyiNgcwele Albrecht Durer
Ukusetyenziswa ebhaliweyo yokuqala igama elithi "uBathathu Emnye," livela Antiyokwe, kakhulu. Esavela incwadi ngomnye ubuveleli, Saint Tiyofilo, malunga 181 (ukubona to Autolycus 2:15), Saint Irenaeus wabhala, "Ukuba iNkosi avela ngaphandle uYise, njani yena bathatha isonka, leyo indalo elifanayo nelethu, kwaye sivuma ukuba uMzimba, bevuma ukuba umxube kwi indebe yakhe ?" (ukubona amahlelo 4:33:2).1
ke, indlela abanye xo bangafuni yabo ngenxa Church of eRoma yokuvuma Ignatius 'ngayo baphakamisa yakhe? Wambiza "iCawa elibamba kaMongameli endaweni yelizwe amaRoma ...;"Yaye wahlabela mgama wathi, "Wena zinomona akukho namnye, kodwa abanye obafundise. Ndinga kuphela ukuba oko endiniwisele umthetho ngazo imiyalelo bakho kuhlala sisebenza " (KwabaseRoma, idilesi; 3:1).
Irenaeus wabala oobhishophu baseRoma phantsi ngexesha lakhe, amazwana, "Kule Ukuze, kunye nemfundiso bapostile baziincamisa, enayinikelwayo eBandleni, ushumayelo inyaniso sele beza kuthi " (ukubona amahlelo 3:3:3).
Ezinye umbilini kukhankanywa Ignatius 'ngayo imfundiso Marian ezikuphefumla efanayo Emnqamlezweni? "Le zobuntombi kaMariya,"Wabhala, "Kwakhe ukuzala, kwaye kananjalo ukufa kweNkosi, zaye isithele umphathi weli hlabathi:iimfihlelo Ezidla sadanduluka simemeza, kodwa ndayimfakamfele ezinzulwini cwaka kaThixo " (ukubona Efese 19:1).
Ngokufanayo, eloba, "uMariya, eganelwe indoda, kodwa nangona kunjalo engekazani nandoda, noku-, kwenziwa isizathu obosindiso yena wohlanga loluntu lonke. ... Ngoko, isuka yokungathobeli uEva lwaso, nangokuva kaMariya " (ukubona Heresies 3:22:4).
namhlanje, into amaKatolika non-amaKatolika ukuba wothini na ukuzibiza umntu uthathwa uMthendeleko njengoko Enyameni kaKristu, bamdumisa Church of eRoma ukuze kunabanye yakhe yokufundisa, bahlonipha imfihlakalo zobuntombi kaMariya?
Kutheni simele ntwanano nantoni na eyahlukileyo ngendoda yakhe ababephila umphefumlo uvana nowam owathi wenza kwaezo zinto kwiinkulungwane elinethoba eyadlulayo?
Irenaeus’ Utitshala waba Saint UPolycarp, naye engumfundi kaYohane. ↩